China Synthetic mica vovoka sy mpamatsy | Huajing
NY HUAJING vokatra mika synthetic dia mandray ny fitsipiky ny fanalefahana kristaly amin'ny hafanana ambony. Araka ny firafitry ny simika voajanahary sy ny firafitry ny anatiny, novokarina taorian'ny electrolysis hafanana sy ny fiempoana amin'ny hafanana avo, ny fampangatsiahana sy ny kristaly, dia azo ny mika sentetika.
Vovoka mikraoba vita amin'ny fingotra
zavatra Loko Fotsy (Lab) Haben'ny sombiny D90 (μm) Insulation Fahadiovana (%) Magnetic Material (ppm) Mositure （%） LOI (650 ℃) PH Fanamarihana
Powder Mica synthetic
HCD-200 fotsy ＞ 96 60 Avo mihoampampana ＞ 99.9 F 50 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6 Fanamafisana avo lenta
HCD-400 fotsy ＞ 96 48 Avo mihoampampana ＞ 99.9 F 50 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6
HCW-200 White White ＞ 98 65 Avo mihoampampana ＞ 99.9 Fizarana 20 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6 Vokatra insulative avo lenta
HCW-400 White White ＞ 98 50 Avo mihoampampana ＞ 99.9 Fizarana 20 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6
HCW-600 White White ＞ 98 25 Avo mihoampampana ＞ 99.9 Fizarana 20 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6
HCW-1250 White White ＞ 98 15 Avo mihoampampana ＞ 99.9 Fizarana 20 ＜ 0,5 ＜ 0,1 7.6
Ao amin'ny fampiharana ny sahan'ady, ny mica dia manararaotra indrindra ny firafitry ny mika roa-dimensional izay manome vokatra manamafy tsara ho an'ny vokatra vita amin'ny rubber. Ny fananana voaaro voajanahary tena tsara, manome fahombiazan'ny insulated tsara ho an'ny fingotra avo insulated. Amin'ny fampiasana ny tombony misakana ny ravina mika, mampitombo ny fihenan'ny rivotra izy io; Izy io dia afaka manolo amin'ny ampahany ny silica, izay manome vahaolana ara-toekarena iray ho an'ny akora fitambarana fingotra; fanoherana ny fanetezam-bolo tena tsara sy fanoherana ny abrasion, manatsara ny fanoherana matevina an'ny fingotra avo lenta. Ny effet interface tsara sy tsara dia manome toetra mampiavaka ny bobongolo.
NY HUAJING vokatra mika synthetic dia mandray ny fitsipiky ny fanalefahana kristaly amin'ny hafanana ambony. Araka ny firafitry ny simika voajanahary sy ny firafitry ny anatiny, novokarina taorian'ny electrolysis hafanana sy ny fiempoana amin'ny hafanana avo, ny fampangatsiahana sy ny kristaly, dia azo ny mika sentetika. Ity vokatra ity dia manana tombony amin'ny fahadiovana fotsy sy avo lenta, votoatin'ny vy ambany dia ambany, tsy misy metaly mavesatra, mahazaka hafanana, mahazaka alkali mahatohitra asidra, ary mahatohitra ny harafesin'ny entona manapoizina, fahombiazana milamina ary insulation tsara.
Fahasamihafana lehibe amin'ny fananan-tany eo amin'ny Mica synthetic sy Mica voajanahary
1. Ny mika synthetic dia tsy misy hidroksil (OH) -, ary ny fanoherana ny hafanana avo sy ny fitoniana amin'ny hafanana dia avo kokoa noho ny an'ny mika voajanahary, ary ny hafanan'ny serivisy dia eo amin'ny 1100 ℃. Ny fluorophlogopite dia lo miadana miadana ambonin'ny 1200 ℃, ary ny hafanan'ny fihenan'ny fluorophlogopite dia eo amin'ny 1375 ± 5 ℃. Ny maripana fampiasa indrindra an'ny mika voajanahary: Muscovite 550 ℃; Muscovite 800 ℃ (Muscovite voajanahary dia manomboka mihena amin'ny 450 ℃ ary efa ho 900 ℃; Muscovite manomboka lo amin'ny 750 ℃, miaraka amin'ny fihenan-danja mavesatra mihoatra ny 900 ℃). Ny karazany mikra dia azo avahana amin'ny alàlan'ny fanamainana hafanana avo na famakafakana hafanana tsy mitovy.
2. Ny mika synthetic dia tsy misy loto madio sy mangarahara tsara. Afa-tsy ny hamafiny somary avo kokoa noho ny an'ny mika voajanahary, ny toetra mekanika hafa, ny fikajiana herinaratra ary ny fivoahan'ny vika mika syntika dia tsara kokoa noho ireo an'ny mika voajanahary. Ny mika synthetic dia afaka manolo tanteraka ny mika voajanahary ary karazana fitaovana insulated mahazaka hafanana avo lenta miaraka amin'ny fananana manokana sy tena tsara.
A. Kitapo tenona 20 na 25kgs / PE
Kitapo B. na 500kgs / PP
C. toy ny fangatahan'ny mpanjifa
Teo aloha: Vovoka mika voajanahary
Flake Mica synthetic